November 2018 – စာအုပ်မြို့တော်
by MM Book City · Published November 30, 2018
**ဂျူး နဲ့ မြန်မာ **
ဂျူးတွေ စာအရမ်းတတ်တယ် ..၊ မြန်မာတွေ ဘွဲ့ အရမ်းမက်တယ်…၊ ဂျူးမိသားစုတွေမှာ မိဘတွေကသားသမီးတွေကို စာဖတ်ကျင့်ရအောင် ငယ်စဉ်အရွယ်ကလေးဘဝကတည်းက ကိုယ်ပိုင် စာကြည့်ခန်းလေး ဖန်တီးပေးတယ်…။ မြန်မာမိသားစုတွေမှာ မိဘတွေကိုယ်တိုင်က စာမဖတ်ဘူး….။ ဂျူးတွေက သူတို့ငွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်တိုးပွားစေတယ်၊ မြန်မာတွေက ငွေကိုစုခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်အတွက် ကျန်တယ်လို့ ယုံကြည်ကျတယ်..။ ဂျူး ဖေဖေတွေက တစ်ပါတ်တစ်ခါ မိသားစုအစည်းအဝေး လုပ်တယ်.. သားသမီးတွေ မိဘအပေါ် အမြင်မရှင်းတာတွေ ဆွေးနွေးချင်တာတွေ၊ တောင်းဆိုချင်တာတွေအတွက်...
♠ မုန်းစွဲ ♠
(ဖြစ်ရပ်မှန် တရားတော်) မုန်းစွဲနဲ့ သေရင်လည်း အသေလှတဲ့သူ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ သူက ပိုဆိုးတယ်။ မုန်းစွဲနဲ့ သေလို့ရှိရင်လည်း အပါယ်လေးဘုံ ရောက်တာကတော့ အသေမလှဘူးဆိုတာ အထူးပြောစရာ မလိုတော့ဘူး။ သေခါနီးလေးမှာ မုန်းစွဲလည်း စွဲတော့ စွဲတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကုသိုလ်ကံအာရုံလေးကလည်း တွဲပြီးတော့ ထင်လာတယ်ဆိုရင် …. စိတ်ဆိုတာက အင်မတန် အဖြစ်အပျက် မြန်တာကိုး။ လက်ဖျောက်တစ်ချက်တီး ကုဋေတစ်သိန်းတောင် ဖြစ်တယ်။ စွဲစိတ်နဲ့ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ကလည်း...
“လူချစ်လူခင်ပေါသူဖြစ်ဖို့ ပျိုးထောင်ရမယ့် အလေ့အကျင့် (၅) ခု”
၁ – မပြောဘူး😷 သိပေမဲ့ အတင်းဝင်မပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ကို မွေးပါ။ အရာရာငါသိတ် ငါတတ်လုပ်သူကို ဘယ်သူမှ သဘောမကျပါဘူး။ မသိဘဲ ဝင်ပြောတဲ့အကျင့်ကိုတော့ ဖျောက်ပစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂ – မငြီးငြူဘူး😄 အမြဲတမ်းငြီးငြူနေသူကို ဘယ်သူမှ သဘောမကျပါဘူး။ တော်ရုံနဲ့ မငြီးငြူတတ်တဲ့ အကျင့်ကိုလည်း ပျိုးထောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၃ – စိတ်ရှည်😁 စိတ်မရှည်တတ်တာကြောင့် သင့်ကို မိတ်ဆွေတွေက ပေါင်းသင်းရမှာ လန့်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ရှည်တတ်အောင်လည်း...
by MM Book City · Published November 29, 2018 · Last modified February 26, 2019
“ဆရာကြီးဦးအောင်သင်းပြောတဲ့ စာဖတ်ခြင်း “
ခွေးတစ်ကောင်ဟာ မီးခဲကိုနင်းမိရင် ဂိန်! ဂိန် ဂိန်အော်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတာပဲ ဒါပဲ နောက်တစ်ကောင်ကထပ်နင်းမိလည်း ဂိန်! ဂိန် ဂိန်အော်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတာပဲ သူနင်းမိလို့ပူတဲ့ကိစ္စကို တစ်ခြားခွေးတွေကို မနင်းမိစေနဲ့ ပူတယ်လို့်မပြောနိုင်ဘူး သူ့အတွေ့အကြုံကို လက်ဆင့်မကမ်းနိုင်ဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့မှာ ဘာသာစကားမရှိလို့ ကိုယ်တို်င်ဖြစ်မှ ကိုယ်တိုင်သိရတာကမ္ဘာဦးအစခွေးတွေကနေ ဒီနေ့ခွေးတွေအထိ ဂိန်! ပဲ တို့တစ်တွေလူတွေမှာတော့ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး ဘာသာစကားရှိတယ် မင်းတို့ငယ်ငယ်ကတည်းက တစ်ပါးသူရဲ့အတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ကမ်းလာတာ အမေဖြစ်သူက အဲ့ဒါမကိုင်နဲ့ ပူပူ...
Motivations / Uncategorized
by MM Book City · Published November 29, 2018
“ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေအမြင့်ဆုံး မင်းသားဖြစ်လာတဲ့ လူဆိုးတစ်ယောက် (သို့ ) အမေရိကန်လမ်းမပေါ်က ဆိုးသွမ်းကလေးတဦးရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ”
ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေအမြင့်ဆုံး မင်းသားဖြစ်လာတဲ့ လူဆိုးတစ်ယောက် (သို့ ) အမေရိကန်လမ်းမပေါ်က ဆိုးသွမ်းကလေးတဦးရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ By ilove သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ကြီးပေါကြီးတဲ့ ၊ အဖေပြောတာက အရူး ၊ အတန်းပိုင်ဆရာပြောတာက စံပြဆိုးသွမ်းကျောင်းသား..ဒါပေမယ့် အမေကတော့ ကျတော့ကို အမြဲအထင်ကြီးပေးခဲ့တယ်။ “THE ROCK ၁၉၇၂ ခုနှစ် မေလ ၂ရက်နေ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဟေးဝေါ့မှာ နပန်းသမားတဦးဖြစ်တဲ့...
“3 Idiots ရုပ်ရှင်ရဲ့ လူသိနည်းတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအချက်များ”
ဒါရိုက်တာ Rajkumar Hirani ရဲ့ 2009 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့3Idiots ဟာ အိန္ဒိယရုပ်ရှင်တွေရဲ့ သမိုင်းမှာ ထင်ထင်ရှားရှား အရှိဆုံး ရုပ်ရှင်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော်မင်းသား Aamir Khan ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။3Idiots ရိုက်ကူးရာမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို ပြောချင်လွန်းလို့ ပရိသတ်အတွက် စုစည်းဖော်ပြပေးပါရစေ။ ၁. အဓိကဇာတ်ကောင် ရန်ချို (Rancho) နေရာအတွက်...
by MM Book City · Published November 21, 2018
“ဆရာများ ရှောင်ရှားသင့်သော အကျင့်စရိုက်များ “
၁။ အတန်းကို ငြိမ်သက်စေဖို့ စားပွဲကို မထုပါနှင့် အတန်းက ငြိမ်တော့ငြိမ်သွားမယ်။ ကျောင်းသားများ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး မဟုတ်လို့ပါ။ ၂။ စိတ်ဆိုးလို့ စာသင်ခန်းကနေ ထွက်မသွားပါနှင့် စာသင်ချင်တဲ့ ကျောင်းသားစိတ်အားငယ်သွားမယ်။ မသင်ချင်တဲ့ကျောင်းသား ခုိုးပြီးပျော်နေမယ်။ ၃။ ကလေးများကို အော်ဟောက်ပြီး မဆုံးမပါနှင့် အော်ဟောက်သံနဲ့ အကျိုးထိရောက်မူ မသက်ဆိုင်လို့ပါ။ ၄။ ကလေး များတစ်ခုခု အပြစ်လုပ်မိရုံနဲ့ သူတို့မိဘကို အကြောင်းမကြားပါနှင့် ကလေးများက မနှစ်သက်သလို မိဘများလည်း...
by MM Book City · Published November 17, 2018
Credit – Phyo Paing Soe
( ၉ )နှစ်သားအရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးက ပေးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာ
ဒီဆောင်းပါးလေး ဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ ဖူကူရှီးမားမြို့မှာ ရဲဝန်ထမ်း အဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ် ကိုင်နေတဲ့ ဟာမင်းသန်း ဆိုတဲ့ ဗီယက်နမ် လူမျိုးက ဗီယက်နမ် နိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းဆီ ရေးခဲ့တဲ့စာလေးက စခဲ့တာပါ ။ ကဲ ဒီဆောင်း ပါးထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်း ဤသည်မရွေး ရေးလိုက် ပါ့မယ် ။ ယင်းသည် ဂျပန်လူမျိုးတို့၏ စိတ်ဓါတ်အင်အား ကြံ့ခိုင်မှု့ ပြယုဂ် သာဓက တစ်ခုဖြစ်ပြီး...